Ifa alakhile uMshengu lifundisa isizwe okungaphezulu komculo - Bayede News
Ngiqalisa umbhalo wami ngala magama angenhla emva kokuba nethuba lokuyobuka iLadysmith Black Mambazo ekhonsathini lomculo ebinalo eThe Playhouse ngobusuku bangoLwesine lwesonto eliphelile. Leli lamanhlakomuzi ngilimatanisa nomsunguli waleli qembu lomculo kaCothoza eselidonse iminyaka ecishe ibe ngamashumi ayisithupha lihlezi esicongweni salo mculo, hhayi eNingizimu Afrika kuphela kodwa emhlabeni jikelele. Kungumlando ukuthi leli qembu seliphumelele izindondo zeGrammy kwaze kwaba kahlanu okungumlando eNingizimu Afrika nasemculweni walolu hlobo.
Umculi esilobe lapha kunguyena ohamba phambili ngamaGrammy angama-31 nguGeorge Solti waseHungary owayecula i-Opera nowadlula emhlabeni ngonyaka we-1997. Kungaba yisizathu sokuqala somsunguli weqembu uSolwazi uJoseph Shabalala sokuzishaya isifuba ngomsebenzi awenzele isizwe. Lokhu kungamenza ukuthi akhulume njengayo leyo mbongi athi, “Mhla nami kwangifica osekwafikela abaningi ngiyolala ngishaye ‘amanhlakomuzi’, ngoba yimisebenzi eyobe ingikhulumela kangcono.”
Dez Khumalo Feb 11, 2020